सल्यानमा मास्क नलागउनेमाथि कारबाही : सानालाई मात्रै ऐन, ठुलालाई चैैन
साउन १६, सल्यान । केहिदिन अघि सल्यानकाे श्रीनगरमा एक वृद्ध नजिकैबाट घरायसी सामान्यखालका सामान किन्न आइन् । जम्मा ८० रुपैयाँ बाेकेर बजारमा निस्किएकी उनि प्रहरीकाे फन्दामा परिन् । कारण थियाे उनले मास्क नलगाएकाे !
सामान किन्न आउँदा मास्क नलगाएर प्रहरीकाे फन्दामा परेकी उनलाइ प्रहरीले सम्झाइ बुझाइ गरेर माफ दिनुकाे सट्टा जरिवाना रसिद काट्न थाल्याे । प्रहरीसँग तर्क गर्न नसकेपछि उनले अन्य व्यक्ती सँग २० रुपैयाँ सापटी मागेर १ सयकाे जरिवाना रसिद काटिन् र सामान नलिएर निन्याउराे मुख लगाएर घर फर्किइन् ।
त्यस्तै केहिदिन अगाडी खलंगाकाे पुरानाे बसपार्कमा पनि एक युवक बाइकमा आए । उनले पनि मास्क लगाएका थिएनन् । प्रहरीले उनलाइ पनि जरिवाना रसिद काट्न थाल्याे । गाेजीमा पर्स नै नबाेकेर हिडेका उनि प्रहरीसँग क्षमायाचना गर्न थाले तर केहि नलागेपछि अन्तिममा साथीलाइ फाेन गरेर सय रुपैयाँ मगाएर जरिवाना तिरेर गन्तव्यतर्फ लागे ।
यसरी मास्क नलगाउनेहरुलाइ गरिएकाे कारबाही जरिवानाबाट सल्यानमा प्रहरीले हिजाे बिहीबारसम्म मात्रै एक लाख १९ हजार ५ सय रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेकाे छ । सरकारले मास्क नलगाएर बाहिर निस्कनेलाइ एक सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने नियम बनाएसँगै त्यसकाे कार्यन्वयनकाे लागि सल्यानमा असार २७ गतेदेखि प्रहरी सफलतापुर्वक लागेकाे छ । तर त्यसकाे मारमा सामान्य पैसा नहुँने नागरिक बढी परेका छन् ।
सरकारले यसरी घर बाहिर निस्कदा मास्क नलगाए जरिवाना तिर्नुपर्ने नियम बनाएपनि याे नियम ठुला बढालाइ भने लागु भएकाे देखिदैन । पछिल्लाे समय सल्यानमा सामान्य नागरिकहरुले जरिवानाकाे मारमा परिरहदा जिल्लाकै ठुला व्यक्तिहरु भने याे नियमलाइ लत्याएर खुल्ला कार्यक्रम समेत गर्ने गरेका छन् । यसरी मास्क नलगाएर कार्यक्रम गर्दा उनिहरुलाइ कुनै कारबाही भएकाे देखिदैन् ।
साउन ११ गते शारदा नगरपालिका ८ सिमखर्कमा नेकपाकाे कार्यक्रम भयाे । जहाँ नेकपाका केन्द्रिय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य टेक बहादुर बस्नेत, शारदा नगर कमिटी अध्यक्ष नविन सिंह भडेँल, जिल्ला कमिटी सदस्य रमेश कुमार गौतम, राम कुमार खड्की, प्रमोद श्रेष्ठ, मनोज सिंह, निम बहादुर नेपाली लगाएतका नेताहरु थिए ।
उनिहरुकै भाषामा त्यहाँ दुइ दर्जनभन्दा बढी काँग्रेस छाेडेर नेकपामा समेत प्रवेश गरेका थिए । तर यसरी खुल्ला रुपमा कार्यक्रम हुँदा समेत कसैकाे मुखमा मास्क देखिएन । न उनिहररुलाइ मास्क नलगाएकाे नियम लाग्याे न त जरिवाना नै !
त्यस्तै सल्यानमा मास्ककाे जरिवाना थालनी गरेकाे भाेलिपल्टै असार २८ गते शारदा नगरपालिकाका मेयर सुरेश अधिकारी सहितकाे टाेली वडा नम्वर ५ रानिकोटमा रहेको हिमदर्शन पार्ककाे उद्घाटन गर्न गए । जुन कार्यक्रममा थुप्रै व्यक्तिहरु थिए । उनिहरु पनि मास्क नलगाएरै कार्यक्रम गरिरहे । यसरी मास्क नलगाउदा नत उनिहररुलाइ पनि कुनै नियम लाग्याे न त जरिवाना नै !
त्यसैगरी साउन ३ गतेपनि शारदा नगरपालिका १२ मा साेलर प्यानल मार्फत संचालित खानेपानी योजनाको उद्घाटन गर्न मेयर सहितकाे टाेली गए । जहाँ खुल्ला कार्यक्रम पनि भयाे तर यहाँ पनि मास्क लगाएकाे कतै देखिएन् ।
त्यसैगरी नेपाली काँग्रेस सल्यानले अहिले ठाउँठाउँमा कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण गरिरहेकाे छ । जहाँ ठुलाे संख्यामा खुल्ला कार्यक्रमहरु पनि भएका छन् । त्यसमा पनि कसैले मास्क नलगाएकाे देखिन्छ । उनिहरुलाइ पनि कुनै नियम लागेकाे देखिदैन भने जरिवाना पनि तिर्नु परेकाे छैन ।
बुधबार जिल्ला प्रहरी कार्यालमा भएकाे पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला स्थित क्रियाशिल पत्रकारहरुले यस्ताे समस्याकाे उठ्ठान समेत गरेका थिए । यसबारे अब चासाेपुर्वक हेर्ने र आफ्नाे ध्यानाकर्षण भएकाे सल्यान प्रहरी प्रमुख डिएसपी ढकेन्द्र खतिवडाले बताएका छन् ।